သမိုင်းတော က်လျှောက် မှ ဂျပန်တွေ ရဲ့ အကောင်းတကာ အကောင်းဆုံး တီထွင်မှုများ – Nyi Ma Lay
သမိုင်းတော က်လျှောက် မှ ဂျပန်တွေ ရဲ့ အကောင်းတကာ အကောင်းဆုံး တီထွင်မှုများ
ဂျပန်တွေ ဟာဆိုရင် ခေတ် မှီဖွံ့ဖြိုးမှုနှု န်းမြန်တဲ့ နိုင်ငံေ တွထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့တွေရဲ့တီထွင်မှုတွေဟာလဲ တော်ေ တာ်လေးကို ဆန်းပြားပြီး ကမ္ဘာကြီးကို ခေတ် မှီအောင် ပြုလုပ်တဲ့ နိုင်ငံထဲကတ စ်ခုလဲဖြ စ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ရဲ့တီ ထွင်မှုတွေက လူသားတွေ ကို တော်တော် အကျိုးပြုလို့ပါ။
လန်ချားေ တွကို ပရိသတ်ကြီးသိမှာပါ….အဲ့လန်ချား ကို ဂျပန်နိုင်ငံ ၁၈၆၀ ခုနှစ် တုန်းက ပထမဦးဆုံး တီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း မှသာ တခြားနိုင်ငံေ တွဆိ ကူးပြောင်း သွားတာပါ။
အသင့်စားေ ခါက်ဆွဲြ ပုတ်တွေကို ပရိသတ်ကြီး ကြိုက်တ ယ်မလား။ အဲ့လိုအ သင့်စားလို့ရမဲ့ အစာ စားတွေကို Momofuku Ando ဆိုတဲ့သူက ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာ အစာရေစာတွေပျက်စီးတာကိုတွေ့ပြီး အဲ့လိုဖြစ်ရင် စားဖို့အတွက်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၅၈ ခုနှစ်မှာ ပထမဆုံး Chikin Ramen ကိုရောင်း ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဝတ္ထုဆိုတာ ဟာလဲ ဂျပန်နိုင်ငံကမရေးခဲ့ရင် ဘယ်သူမှ သိကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ The Tale of Genji ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုဟာ သမို င်းမှာ ပထမဆုံးရေးခဲ့တဲ့ ဝတ္ထုလို့ပြောရမှာပါ။ ပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ အချိန် ကတော့ ၁၁ ရာစုကဖြစ်ပြီး ရေးတဲ့သူ ကတော့ Murasaki Shikibu ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ကာ အကြောင်း ကတော့ ရုပ်ရည်ချောမောတဲ့ မင်းမျိုးနွ ယ်တစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်အကြော င်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
Katana ဆိုတာကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးလဲ သိမှာပါ….ဂျပန်ဆာမူရိုင်းတွေ ကိုင်ဆောင်တဲ့ ဓါးပေါ့…. 1392-1573 CE မှာစတင်ပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ Walkman ဆိုတာ ကတော့ သမိုင်းမှာ ပထမဆုံးသော ကက် ဆက်ဖြစ်ကာ ၁၉၇၉ခုနှစ်မှာ Sony ကထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်ေ တွသိကြတဲ့ အခွေ CD ဆိုတာက Sony နဲ့ Philips ( Dutch နိုင်ငံရဲ့ company ) တို့နှစ်ခုစလုံးက တီထွင်ခဲ့ကြ တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ Sony ကနောက် ပိုင်းမှာတော့ DVD နဲ့ Blu-Ray တွေကို ထပ်တီထွ င်ခဲ့ပါတယ်။ ကာရာအိုကေစက်ကို Daisuke Inoue ဆိုတဲ့သူက ၁၉၆၉ ခုနှစ်မှာ တီထွင်ခဲ့ပြီး ၁၉၇၁ ခုနှစ်မှာမှ ဈေးကွက် ထဲပို့ခဲ့ပါတယ်။ Karaoke ဆိုတဲ့စကားက တိုက်ရိုက်ဆ င်းသက်လာတာမ ဟုတ်ပါဘူး….“kara okesutura” ဆိုတဲ့ ဂျပန်စကားဖြစ်ပြီး အဓိပ္ပာယ်ကတော့ “empty orchestra” ပဲဖြစ်ကာ အတိုခေါ်လိုက်တော့ “Karaoke” ဆိုတာဖြစ်လာပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီး ယနေ့သုံးနေတဲ့ Emoji တွေဟာဆို ရင်လဲ ဂျပန်နိုင်ငံက Shigetaka Kurita နဲ့ သူရဲ့အဖွဲ့ဟာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး စာတွေအ တွက် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ Emotion တွေကိုဖော်ပြဖို ့အတွက် ပုံတွေ ကိုပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ပြုလု ပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Toshiba ဆိုတဲ့ ဂျပန် Company ကလဲ ပထမဆုံး လျှပ်စစ်ပေါင်းအိုးကို ၁၉၅၅ခုနှစ်က တီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Camera Phone ဆိုတာကလဲ Kyocera Corporation ဆိုတဲ့ ဂျပန် Company က VisualPhone VP-210 ဆိုပြီး ၁၉၉၉ခုနှစ်က ပထမဆုံး ကင်မရာပါတဲ့ ဖုန်းအဖြစ် ထွက်ရှိလာတာပါ။ EKG ဆိုတဲ့ နှလုံးခုန်နှုန်းကိုပြတဲ့ စက်ဟာဆိုရင်တော့ ၁၉၃ရခုနှစ်က Taro Takemi ကတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
တခြားသော ဂျပန်တွေ တီထွင်ခဲ့တဲ့ အရာတွေကတော့ Pocket Calculator, Blue LED Light, Lithium Ion Battery, QR Code, 3D Printing, Bullet Train နဲ့ Flash Memory ဆိုတဲ့ ဖုန်းထဲမှာ Memory ပိုထည့်လို့ရအောင်လုပ်ပေးတဲ့ Card တွေကို ပထမဆုံး ဂျပန်နိုင်ငံက တီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဂ်ပန္ေတြ ဟာဆိုရင္ ေခတ္ မွီဖြံ့ၿဖိဳးမႈႏႈ န္းျမန္တဲ့ နိုင္ငံေ တြထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ေတြရဲ့တီထြင္မႈေတြဟာလဲ ေတာ္ေ တာ္ေလးကို ဆန္းျပားၿပီး ကမၻာႀကီးကို ေခတ္ မွီေအာင္ ျပဳလုပ္တဲ့ နိုင္ငံထဲကတ စ္ခုလဲၿဖ စ္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ရဲ့တီ ထြင္မႈေတြက လူသားေတြ ကို ေတာ္ေတာ္ အက်ိဳးျပဳလို႔ပါ။
လန္ခ်ားေ တြကို ပရိသတ္ႀကီးသိမွာပါ….အဲ့လန္ခ်ား ကို ဂ်ပန္နိုင္ငံ ၁၈၆၀ ခုႏွစ္ တုန္းက ပထမဦးဆုံး တီထြင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း မွသာ တျခားနိုင္ငံေ တြဆိ ကူးေျပာင္း သြားတာပါ။
အသင့္စားေ ခါက္ဆြဲျ ပုတ္ေတြကို ပရိသတ္ႀကီး ႀကိဳက္တ ယ္မလား။ အဲ့လိုအ သင့္စားလို႔ရမဲ့ အစာ စားေတြကို Momofuku Ando ဆိုတဲ့သူက ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဒုတိယကမၻာစစ္မွာ အစာေရစာေတြပ်က္စီးတာကိုေတြ႕ၿပီး အဲ့လိုျဖစ္ရင္ စားဖို႔အတြက္ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
၁၉၅၈ ခုႏွစ္မွာ ပထမဆုံး Chikin Ramen ကိုေရာင္း ခ်ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဝတၳဳဆိုတာ ဟာလဲ ဂ်ပန္နိုင္ငံကမေရးခဲ့ရင္ ဘယ္သူမွ သိၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ The Tale of Genji ဆိုတဲ့ ဝတၳဳဟာ သမို င္းမွာ ပထမဆုံးေရးခဲ့တဲ့ ဝတၳဳလို႔ေျပာရမွာပါ။ ေပၚထြက္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ ကေတာ့ ၁၁ ရာစုကျဖစ္ၿပီး ေရးတဲ့သူ ကေတာ့ Murasaki Shikibu ဆိုတဲ့အမ်ိဳးသမီးပဲျဖစ္ကာ အေၾကာင္း ကေတာ့ ႐ုပ္ရည္ေခ်ာေမာတဲ့ မင္းမ်ိဳးႏြ ယ္တစ္ေယာက္ရဲ့ အခ်စ္အေၾကာ င္းပဲျဖစ္ပါတယ္။
Katana ဆိုတာကိုေတာ့ ပရိသတ္ႀကီးလဲ သိမွာပါ….ဂ်ပန္ဆာမူရိုင္းေတြ ကိုင္ေဆာင္တဲ့ ဓါးေပါ့…. 1392-1573 CE မွာစတင္ေပၚထြက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ Walkman ဆိုတာ ကေတာ့ သမိုင္းမွာ ပထမဆုံးေသာ ကက္ ဆက္ျဖစ္ကာ ၁၉၇၉ခုႏွစ္မွာ Sony ကထုတ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ပရိသတ္ေ တြသိၾကတဲ့ အေခြ CD ဆိုတာက Sony နဲ႔ Philips ( Dutch နိုင္ငံရဲ့ company ) တို႔ႏွစ္ခုစလုံးက တီထြင္ခဲ့ၾက တာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ Sony ကေနာက္ ပိုင္းမွာေတာ့ DVD နဲ႔ Blu-Ray ေတြကို ထပ္တီထြ င္ခဲ့ပါတယ္။ ကာရာအိုေကစက္ကို Daisuke Inoue ဆိုတဲ့သူက ၁၉၆၉ ခုႏွစ္မွာ တီထြင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၁ ခုႏွစ္မွာမွ ေဈးကြက္ ထဲပို႔ခဲ့ပါတယ္။ Karaoke ဆိုတဲ့စကားက တိုက္ရိုက္ဆ င္းသက္လာတာမ ဟုတ္ပါဘူး….“kara okesutura” ဆိုတဲ့ ဂ်ပန္စကားျဖစ္ၿပီး အဓိပၸာယ္ကေတာ့ “empty orchestra” ပဲျဖစ္ကာ အတိုေခၚလိုက္ေတာ့ “Karaoke” ဆိုတာျဖစ္လာပါတယ္။
ပရိသတ္ႀကီး ယေန႔သုံးေနတဲ့ Emoji ေတြဟာဆို ရင္လဲ ဂ်ပန္နိုင္ငံက Shigetaka Kurita နဲ႔ သူရဲ့အဖြဲ႕ဟာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ၿပီး စာေတြအ တြက္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ Emotion ေတြကိုေဖာ္ျပဖို ့အတြက္ ပုံေတြ ကိုျပဳလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ အေတြးနဲ႔ျပဳလု ပ္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ Toshiba ဆိုတဲ့ ဂ်ပန္ Company ကလဲ ပထမဆုံး လၽွပ္စစ္ေပါင္းအိုးကို ၁၉၅၅ခုႏွစ္က တီထြင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
Camera Phone ဆိုတာကလဲ Kyocera Corporation ဆိုတဲ့ ဂ်ပန္ Company က VisualPhone VP-210 ဆိုၿပီး ၁၉၉၉ခုႏွစ္က ပထမဆုံး ကင္မရာပါတဲ့ ဖုန္းအျဖစ္ ထြက္ရွိလာတာပါ။ EKG ဆိုတဲ့ ႏွလုံးခုန္ႏႈန္းကိုျပတဲ့ စက္ဟာဆိုရင္ေတာ့ ၁၉၃ရခုႏွစ္က Taro Takemi ကတီထြင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
တျခားေသာ ဂ်ပန္ေတြ တီထြင္ခဲ့တဲ့ အရာေတြကေတာ့ Pocket Calculator, Blue LED Light, Lithium Ion Battery, QR Code, 3D Printing, Bullet Train နဲ႔ Flash Memory ဆိုတဲ့ ဖုန္းထဲမွာ Memory ပိုထည့္လို႔ရေအာင္လုပ္ေပးတဲ့ Card ေတြကို ပထမဆုံး ဂ်ပန္နိုင္ငံက တီထြင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
Previous post ရွှေ အကြောင်း လုံးဝ နားမလည်တဲ့သူတွေတောင် အလွယ်တစ်ကူ ရွှေအတု အစစ် ခွဲခြားနည်း
Next post သင့်ရဲ့ ကားလေး ရေရှည်အသုံးခံအောင် ကား နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန်များ